t-Luck algọridim | ThatsLuck.com
Esi tụọ ihu ọma
Lucktụle chi ọma n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ ịnwa ịkọ ọdịiche nke ohere roulette na obere oge bụ ezigbo utopia, agbanyeghị ka ọnụọgụ ntụgharị na-abawanye, n'ihi ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ amụma na-amalite ịdị na-erughị ala, n'ụzọ bụ isi, oghere ndị ahụ chọpụta ọdịmma anyị ma ọ bụ ọghọm na ịkụ nzọ a ohere na roulette, bụ n'ezie atụ.
Possiblezọ kwere omume iji gụọ ọdịiche bụ nke akọwararịrị na ► post a, mgbe m na-agwa gị banyere ama Marigny ọnụọgụ.
Agbanyeghị, ọnụọgụ Marigny nwere oke, ebe ọ bụ na ọ dabere naanị na imegide ma na-enye ohere, ya bụ, na-enweghị iburu ọnụnọ nke efu efu, nke dị mwute ịbụ oke njehie nke nyocha.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị echee ihe atụ 40.000 na-atụgharị na roulette, dị ka Marigny si kwuo, anyị ga-enwe ihu ọma anyị (ya na ugboro 5 okpukpu anọ nke mgbọrọgwụ akpọwara) ga-abụ nkeji 1.000 meriri, mana ọ bụ ihe nwute na 40.000 spins anyị ga-zutere 1.081 ugboro efu, n'ihi ya, dị ka ị pụrụ ịhụ na roulette nzo na Red ma ọ bụ Black na ọbụna uka (ewepụghị nzọ), ruru 38.000 / 40.000 spins, n'ihi na efu ọ bụ mgbakọ na mwepụ agaghị ekwe omume iji merie ọbụna otu unit!
Otú ọ dị, njedebe a ka ukwuu ma ọ bụrụ na anyị atụle ntanye na otu nọmba, na nke a n'eziokwu site n'ịchọ mgbe niile maka ọbụna oke (nzọ efu) anyị nwere ike ịlanarị ihe karịrị 200.000 spins!
The ịme anwansị nke gara aga oyiyi e nwetara na software bot ► Roulette Bias Sniper, dị ka ị pụrụ ịhụ mgbe 215.000 spins na-egwuri ewepụghị nzọ, a ka nwere nọmba 2 nke gaara eme ka ọkpụkpọ merie ihe ruru 30 otu mmeri nọmba, yabụ karịa 1.000 nkeji! Mana nke a bụ isiokwu anyị ga-atụle na omimi karịa na ọkwa ọzọ.
Methodzọ ọzọ nke na-atụle oghere, mana karịa karịa nke gara aga, bụ ► Mmụta t-nkesa, nke m ga-egosi gị ozugbo.
Ogidi mbụ nke usoro a bụ nkeji nke mmụba maka ọdịiche, a na-akpọ ọkọlọtọ ndiiche (sqm)
Ọkọlọtọ dị iche na mgbọrọgwụ akụrụngwa nke ngwaahịa nke ọnụ ọgụgụ nke ihe (n) oge ihe omume dị mma (p) na nke puru iche (q).
dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na anyị tụlere agba agba 1.369 nke roulette anyị nwere
Ogidi nke abụọ nwa akwukwo è nkezi nke ihe omume (m), nke hà nha ngwaahịa nke ihe omume (n) na ezigbo puru omume.
m = n * peeji
ọzọ n'ihe metụtara ntụgharị 1.369 n'elu, ọ bụrụ na anyị atụle otu ọnụ ọgụgụ, anyị nwere:
Valueskpụrụ abụọ a, nke pụtara (m) na nkewa square (sqm), nwere ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ zuru oke, n'ihi na ha na-ekwe ka oghere ọ bụla belata n'otu nha, n'agbanyeghị ihe omume nke ọ na-eme.
Mbelata a dị mkpa na-enweta kpọmkwem site nwa akwukwo, nke bụ oke dị n'etiti ntụgharị (aghotara dị ka ọdịiche dị n'etiti ihe ọma dị na U na nke pụtara) yana ntụgharị ntụgharị anọ.
Ya mere, anyị nwere nke ahụ:
Ọzọkwa n'ihe gbasara 1.369 atụpụrụ atụ nke bọọlụ bọl, ọ bụrụ na ima atụ nọmba 13 na-abịa oge iri na itoolu, anyị nwere nke ahụ
Ihe + ma ọ bụ - akara na-egosi hyperfrequency ma ọ bụ hypofrequency.
Ọnụ ọnụọgụ nwa akwukwo ọ bụ ya mere ọ bara oke uru n'ihi na enwere tebụl ọnụ ọgụgụ enwere ike ịchọta ya na net, nke na-egosi kpom kwem pasent nke puru na ụfọdụ ụkpụrụ nke na-gafere t.
A na-echekarị na oke oke na nwa akwukwo hà nhata 4, nke ahụ bụ oke ọnụ ọgụgụ nke ekwere na ihe puru omume karịa ya bụ ihe efu.
Mmehie 2 nke Marigny
Ghọta ihe nwa akwukwo na otu esi agbakọ ya, ana m agwa gị ozugbo na usoro mmesịa a dabara adaba karịa ọnụọgụ Marigny, n'ihi na nsonaazụ ọ na-ewepụta ọ na-echekwa ụtụ isi (efu).
Nnukwu ndudue nke Marigny bụ iche na ozugbo ohere ruru ihe dị iche 3 ma ọ bụ karịa, ọ ga-enwerịrị ịlaghachi, yabụ na-atụ aro ka ebumnuche maka nlọghachi ozugbo nke ọdịiche ahụ.
Njehie mbụ nke Marigny anaghị atụle efu ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na a ga-alaghachi oghere ahụ, ọ bụkwa eziokwu na ọ nweghị onye nwere ike ịhazi ihe kacha mkpa na ọnụọgụ ole ọdịiche a ga-eme.
Ọ bụrụ na ohere ruru ihe atụ ọdịiche 4 (ọnụọgụ Marigny dị oke elu ebe ọ bụ na nke kachasị bụ 5), onye ga-emesi anyị obi ike na usoro ntụgharị dị n'etiti uhie na oji nke na-adịgide ọbụna ọtụtụ narị ntụgharị enweghị ike ịmalite?
Ọ bụghị ihe ọjọọ, mmadụ ga-eche, na ntughari usoro ị gaghị emeri ma ị gaghị efunahụ ... mana mba, n'ihi na n'ọnọdụ ọ bụla, efu ahụ ga-apụta dị ka atụmanya ya si dị, na-ebibi uru niile anyị nwere ike nweta mgbe ọdịiche ahụ na-alaghachi n'ezie site na nhazi ihe okike.
Nke abụọ na mmejọ kachasị njọ nke Marigny: na-atụle ntụgharị anakọtara ọtụtụ ụbọchị na site na roulette dị iche iche dị ka otu na-adịgide adịgide (nke a makwaara dị ka "njigide onwe onye").
M nwalere n'ụzọ doro anya echiche a na-adọrọ mmasị na mgbe nde ole na ole a na-atụgharị atụgharịrị m bịara nkwubi okwu a: maka ebumnuche nke ntụkwasị obi ndekọ ọnụ ọgụgụ, a ga-atụle oghere nke roulette naanị na usoro ntụgharị dị iche iche maka otu jenerato nke mepụtara ha. na usoro ihe agbasaghị.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ nyocha nke ntụgharị 1.000 ka ọ bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, anyị ga-edekọ 1.000 spins na-aga n'ihu n'otu roulette ma ọ bụghị ihe atụ 10 ụzọ nke 100 spins ewere na ụbọchị dị iche iche na site na iche roulette.
Na-echeta echiche a mgbe niile n'ọdịniihu, n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa ma doro anya na ọ naghị emetụta mgbe anyị na-achọ nleghara anya nke roulette, n'ihi na n'ọnọdụ a, nchịkọta data niile ka ga-egosi, n'ezie ọ ga-egosi na ọnụnọ nke nkwarụ ma ọ bụ na ọ bụghị, mana nke a bụkwa isiokwu ekpuchilarịrị na ► ọzọ post.
t-Luck algọridim (Ozizi)
Ugbu a, ka anyị hụ nke echiche nke ọnụ ọgụgụ m dabere na ngwanrọ ọhụrụ Algọridim t-Luck.
Ka anyị nyochaa tebụl dị n'elu ọzọ:
Dabere na data a kọrọ, ọ bụrụ na ihe atụ acha ọbara ọbara rute uru nwa akwukwo nhata 3,00 pụtara na ihe puru omume nke uru a ruru 3,50 bụ naanị 0,02%!
N'eziokwu, Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe, n'ihi na ikekwe ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị n'ezie bụ: ozugbo ohere ruru t = 3,00 ugboro ole ka ọ rutere na t = 3,50? Emebeghị m nkwenye a, mana ọ gaghị ewe ogologo oge ma echere m na tebụl dị n'elu ga-agụ nke ọma dịka nke a: na ọnụọgụ na-enweghị njedebe nke ntụgharị 1.000 ndị ga-enwe uru t = 3,00 ga-abụ 0,13% ebe a ga-enweghị tranche na t ukwuu karịa 4.
Otú ọ dị, ịchọrọ ịtụle dị ka ihe a pụrụ ịdabere na ya na nchepụta na tranche na t = 2,50 nwere ike karịa t = 3,00 naanị na 0,13% nke ikpe, Achọrọ m ịtọ Algọridim t-Luck na otu mgbagha, n'echiche na ma Marigny ọnụọgụ na nwa akwukwo, mgbe ha ruru oké ụkpụrụ, ha bụ n'ezie na-anọchi anya a nnọọ ike na-emekarị nke a nyere ohere, nke dị ka anyị hụrụ na mbụ, nwere ike ịlaghachi mgbe onye maara otú ọtụtụ narị spins, mgbe anyị na-anọgide na-akwụ ụtụ isi na counter ruru ka efu.
Iji gosi na ihe a kọrọ otú m dị, m gwa Abigel abụọ ndị a na eserese, na-ezo aka 1.000 spins nyochaa ma na mmekọrita na uru nwa akwukwo (eserese mbụ) na omume nke ọdịiche Red ohere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, eserese mbụ gosipụtara na ozugbo uru ruru t = ruru -2,5 mgbe ihe dị ka 200 spins (ya mere, anyị nọ n'ihu hypofrequency nke uhie, ya bụ nwa apụtawo ọtụtụ oge) uru nke nwa akwukwo amalite ibili, na-egosi na Ohere Uhie jiri nke nta nke nta malite imeghachi ugboro ole ọ dabara na oghere ojii ọzọ.
Otú ọ dị, ịrị elu ahụ abụghị na mberede, mana anyị na-ahụ na nguzozi (uru nwa akwukwo nso efu) fọrọ nke nta ka 1.000 spins, n'ihi ya, anyị na-egwu banyere 800 spins nke anyị na-akwụ ndị mara mma nke 800/37 = 22 efu na eziokwu dị ka ị pụrụ ịhụ na eserese nke abụọ n'ihi na efu nke hypothetical ego nke player nke malitere ịkụ nzọ mgbe 200 ntụgharị (ego / ọdịiche uru nke -45 na eserese nke abụọ), mechiri mmemme 1.000 na ọnụọgụ ole na ole meriri, n'ihi na ọtụtụ n'ime uru ndị na-enweta site na mmechi nke ọdịiche ahụ erila efu.
Kedu ihe ga - abụrịrị atụmatụ kachasị mma maka onye ọkpụkpọ na nke a? Ọ ga-abụrịrị ịmalite ịkpọ egwu na t = -2,5 (na ntụgharị 204) wee kwụsị ozugbo enwere ego ole na ole (na spin 246) na uru nwa akwukwo rịgoro na -2,00 si otú ahụ na-emeri 3 nke uru. O yiri obere? Onye ọkpụkpọ a na-ekwu okwu ga-emeri 3 iberibe na 42, ma ọ bụ 7% nke Roi!
Site na ihe a niile na-enweta anyị Iwu mbụ: malite ịkụ nzọ naanị mgbe nwa akwukwo rute uru nke +/- 2,5 ma kwusi ozugbo enwere uru.
Ogidi nke abụọ Algọridim t-Luck bụ ịchọ a uru nke nwa akwukwo 2,5 ọ bụghị na ohere ndị na-abanye na ọdịiche siri ike dị ka eserese dị n'elu na-ezo aka na Red, ma na ohere nke kama inwe ọnọdụ siri ike karị, dị nro karịa ndị ọzọ na m degharịrị okwu ahụ Middle Trend.
Mana ọ bụrụ na ohere ndị a enweghị nnukwu ọdịiche, kedu ka ha ga esi baa uru nwa akwukwo 2,5?
Nke a bụ ihe atụ nke ihe m na-ekwu ozugbo Middle Trend.
Ihe eserese abụọ a dị n'elu na-ezo aka na oge ọhụụ, oge a ka a na-atụgharị na 100.
Ọ bụrụ na i lee eserese mbụ ị ga-achọpụta na uru ahụ bara nwa akwukwo ezuola ekpe anụ, nke ahụ bụ n'etiti + 1 na -1,5 na omume, na eserese mbụ uru a bara uru malitere na 0, wee bilie +1, daa na -1,5 wee mesịa laghachi +1.
Ruo ugbu a ọ dịghị ihe iju, ma ọ bụrụ na anyị gụọ uru nwa akwukwo dika opekempe na oke ụkpụrụ anyị ruru na anyị ga - enweta site na + 1 (max) ọ dabara na -1,5 (min), yabụ enwere otu ndiiche n’agbata opekempe na oke uru nke + 1 / -1,5 ma ọ bụ 2,5 isi!
N'ebe a, anyị achọpụtala uru 2,5 anyị bara uru yana ya mere, mgbe anyị na-atụgharị 20 nke eserese ahụ, e mepụtara ọdịiche nke 2,5 ma anyị amalite ilekwasị anya na Red (n'ihi na -1,5 anyị nọ n'ọnọdụ ọnọdụ adịghị ike) ebe a bụ na akara aka ( na ọnụ ọgụgụ) na-akwụghachi anyị ụgwọ, na-egwuri egwu n'eziokwu nwa akwukwo = + 1 anyị gaara emeri nkeji 15 na erughị iri asatọ!
O doro anya na dabere na iwu 1 n'elu anyị ga-akwụsị mgbe uru mbụ gasịrị, agbanyeghị na ihe atụ a, enwere m olileanya ịkọwapụta echiche nke Middle Trend na otu esi agụta nwa akwukwo dabere na ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ kacha nta na nke kachasị zutere.
Algọridim t-Luck (sọftụwia)
Ihe niile doro anya? Ọ dị mma, echegbula, sọftụwia ahụ ga - eme atụmatụ ndị a niile Algọridim t-Luck, ihe ọkpụkpọ ga naanị ịbanye nọmba ka ha na-apụta na ikekwe nzọ nanị na ọbụna uka (ewepụghị nzọ) mgbe ọ na-egosi na Software.
Mgbe rụọ ọrụ Algọridim t-Luck jiri koodu ị maraworị otu esi achọta, naanị mepee tebụl egwuregwu ma bido itinye nọmba ndị ewepụgoro, ime nke a pịa otu bọtịnụ dị na kọlụm dị na etiti site na 0 ruo 36.
Mgbe ịpịrị nọmba, ọ na-egosikwa na igbe dị na ala aka ekpe (Ikpeazụ) dị ka ihe ncheta anyị.
Kpachara anya mgbe ị debanyere nọmba, n'ihi na ọ bụrụ na i tinye nọmba na-ezighi ezi ọ nweghị ụzọ idozi ya na ị ga-pịa akara ahụ ThatsLuck n'aka nri n'aka ekpe, nke na-amaliteghachi nnọkọ ahụ yana mgbe ahụ ị ga-amaliteghachi ọzọ.
Na omume ọ dịghị ihe ọzọ ị ga - eme, mgbe otu n'ime ohere iji nyochaa nke ị ga - ahụ bụ:
EdRed / Black
na-arụpụta a-amụrụ t-uru ọdịiche nke 2,5 ozugbo na Algọridim t-Luck a na-arụ ọrụ ịdọ aka ná ntị na-egosi ohere ị ga-achọ maka!
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo dị n'elu, na nke a ọ na-egosi na ị gbalịrị ịkụ nzọ na nke isii nke isii (SES 1), nke ị nwere ike ịhụ na ogidi abụọ ahụ n'aka nri (nke na-anọchite anya Ugboro sortie nke ohere dị iche iche), ọ bụghị sestina kachasị (nke bụ SES 2), ma ọ bụ nke kacha nta (SES 3 na SES 6 anaghị ahapụ).
Ọ bụrụ na ọnụọgụ dị n'etiti 1 na 6 kwesịrị ịpụta, uru nke nwa akwụkwọ t ga-ada n'okpuru 2,5 wee dọọ ịdọ aka ná ntị ahụ ga-apụ n'anya, n'ụzọ doro anya ruo mgbe ịdọ aka ná ntị ị na-adịghị nzọ ma dekọọ nọmba mmeri dị ka nke ha si dị Usoro oge nke ntọhapụ.
O doro anya na ọ ga-emekwa ịkụ nzọ karịa ohere n'otu oge ahụ na, na nke a, ịnwere ike ịnwa ịkụ nzọ ọbụla nkeji ole na ole nke ọnụ ọgụgụ dị ala karịa ọnụ ọgụgụ dị n'etiti ohere ịnweta nzọ, dịka m mere na foto dị n'okpuru , ebe m gafere COL 1 na SES 2 ma ya mere m na-etinye nzọ na nọmba abụọ nkịtị 7 na 10.
Enwere m olile anya na enyewo m nyocha nke ọma banyere ọrụ ahụ Algọridim t-Luck, m na-atụ aro bụ nnọọ mfe: mgbe dịkwuo gị nzọ na guzosie site na mmalite otú ole nkeji iji merie tupu ịkwụsị (Stopwin), a uru na m nwere ike ikwu mwube na 10, mgbe ahụ n'ezie ime dị ka ị chọrọ, dị ka mkpa dị ka mgbe niile nwere fun na akụ si efu!
Nbudata Nbudata	t-Algo.zip - 1 MB
8 Decks BJ onyeisi